Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 14)
Ny efijery fanidiana tsara indrindra ho an'ny Android
Androany aho mitondra anao ho ahy anio izay ny efijery fanidiana tsara indrindra ho an'ny Android, fampiharana maimaimpoana feno fiasa mahaliana.
Fampiharana mampihetsi-po handrakofana ny efijery Android tsy misy Root, na dia ny fakan-tsary voalohany aza
Androany aho mitondra fampiharana manaitra anao hahafahanao mirakitra ny efijery amin'ny Android ary mampiasa ny fakan-tsary anoloana na aoriana handraisam-peo aza.
Duolingo dia mandefa klioba miteny mba hampifaninana ny fianarana
Raha te-hientanentana amin'ny fianarana fiteny iray ianao, miaraka amin'ny "klioba miteny" an'i Duolingo ho zava-baovao, dia afaka mifaninana amin'ny namana ianao.
Fampiharana Android 20 tsara indrindra amin'ny 2016
2016 dia taonan'ny fanavaozana tena lehibe ho an'ny fampiharana marobe sy ny fahatongavan'ireo vaovao vaovao toa an'i Google.
Fampiharana alaina indrindra amin'ny 2016 avy amin'ny Play Store
Izahay dia mamela anao amin'ireo fampiharana 5 ambony izay no nakarina indrindra tamin'ity taona 2016 ity tao amin'ny Google Play Store.
Ny vaovao Telegram tsara indrindra 5 amin'ny 2016
Taona iray manan-danja ho an'ny Telegram ny 2016 amin'ny alàlan'ny fanohizana manolotra kalitao sy fiasa vaovao toa ny 5 izay angoninay amin'ity horonan-tsary sy lahatsoratra ity.
Microsoft dia manavao ny Office for Android miaraka amin'ny fanohanana ireo sary vector na SVG
Manomboka androany dia azonao atao ny mampiasa sary SVG ao amin'ireo rindrambaiko 3 an'ny Microsoft an'ny Android
Ny fampiharana signal ho an'ny chat manokana dia mampiasa Google handingana ny sivana ataon'ny governemanta
Ny Signal dia rindranasa chat miafina izay mampiasa fomba antsoina hoe "domain front" hialana amin'ny sivana ataon'ny governemanta amin'ny firenena sasany.
Ny vaovao WhatsApp 5 tsara indrindra amin'ny 2016
WhatsApp tamin'ity taona ity dia nanana iray tena mahaliana miaraka amina medley misy endri-javatra vaovao tonga amin'ny ...
Mpiara-miasa Disney miaraka amin'i Snapchat hitondra atiny vaovao amin'ny fampiharana
Snapchat sy Disney dia mifankahazo tsara ary izany dia niteraka fantsona vaovao tao amin'ny faritra "Discover" ao amin'ny fampiharana Snapchat.
Ahoana ny fomba hijerena ny valin'ny Lotera Krismasy amin'ny fotoana tena izy
Androany aho mitondra anao ho ahy izay fampiharana tsara indrindra hijerena ny valin'ny loteria Krismasy 2016 amin'ny fotoana tena izy ary miaraka amin'ny fampandrenesana.
Nanamora ny fanamarinana SMS tamin'ny Android ny Facebook
Nanatsotra ny fidirana amin'ny alàlan'ny fanamarinana SMS ny Facebook mba tsy handany fotoana be loatra amin'ity mpampiasa ity ny mpampiasa.
Facebook dia manolotra ny Live Audio hanehoana ny tenany ho toy ny safidy hafa amin'ny podcast
Facebook dia manolotra zava-baovao amin'ny Live Audio izay mamela anao handefa mivantana ilay audio toa ny fanaony amin'ny Facebook Live Video.
Ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Twitter dia nalamina araka ny tokony ho izy
Manomboka izao dia hiova ny valin'ny fikarohana natao tao amin'ny Twitter ka izay voalohany indrindra ho an'ny mpampiasa no aseho aloha.
Prisma dia tsy voafetra intsony amin'ny endrika efajoro ho an'ny sivana manokana
Manomboka androany dia efa mamela anao hampiakatra ny endrik'ireo sary novainao i Prisma mba tsy ho toradroa fotsiny.
Manatsara ny "Tantara" amin'ny stiker, tsy misy tanana ary maro hafa ny Instagram
Nohavaozina ny Instagram hanatsarana ny iray amin'ireo vaovao lehibe indrindra amin'ny taona: ny "tantara". Ankehitriny ianao dia afaka manampy sticker, tsy misy tanana, sy maro hafa.
Ny mpilalao mozika maivana indrindra ho an'ny Android dia milanja latsaky ny 1 Mb ary io no atolotray antsika
Androany dia manolotra sy manome soso-kevitra izahay hoe iza no mpilalao mozika maivana indrindra amin'ny Android.
Facebook Messenger dia manampy antso an-tsarimihetsika vondrona hatramin'ny olona 50
Ny antso anaty vondrona video dia mampitombo ny isan'ny mpampiasa ao amin'ny Facebook Messenger ka hatramin'ny 50 hatramin'ny iray andro lasa izay amin'ny Android
Afaka mifehy ny mozikao amin'ny Spotify avy amin'ny Samsung Gear S3 ianao izao
Androany ny akanjo roa an'ny Samsung, ny Gear S2 ary ny Gear S3, dia mamela ny fifehezana ny mozika izay milalao ao amin'ny Spotify.
Kik dia manampy antso an-tsarimihetsika vondrona ho an'ny fampiharana fandefasan-kafatra
Kik dia rindrambaiko fifampiresahana izay nanampy androany ny antso horonantsary vondrona hahatonga azy ireo ho mavitrika kokoa miaraka amin'ny mampiavaka azy manokana.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Huawei Music mba hisintomana mozika maimaim-poana
Amin'ny alàlan'ny fangatahana malaza dia ampianarinay anao anio ny fomba fametrahana sy fampiasana ny Huawei Music, ilay mpilalao mozika Huawei tany am-boalohany mamela anao hisintona mozika maimaimpoana.
TWRP dia tonga tampoka amin'ny Google Play Store
TWRP dia fitaovana ilaina amin'ny fametrahana ROM manokana. Ankehitriny dia manana ny fampiharana ofisialy ao amin'ny Play Store.
Hita amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play Store izao ny Gboard
Hatramin'ity faran'ny herinandro lasa teo ity, ny fitendry Google Gboard misy ny bokotra G eo amin'ny interface dia misy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny rehetra.
Mahatratra 1.1 ny PhotoScan hampiakarana ny faran'izay avo indrindra amin'ny scanner-ny sary
Ary farany, PhotoScan dia manitsy ny olan'ny famahana farany avo indrindra avela amin'ny fanavaozana ny kinova 1.1 an'ny fampiharana
Evernote manitsy ary tsy hampihatra ny fanovana amin'ny Politikan'ny tsiambaratelo
Evernote dia nanitsy tamin'ny farany ary tsy hampihatra, ireo fanovana nambara tamin'ny Politikan'ny tsiambaratelo izay manan-kery tamin'ny Janoary 2017
Atorinay anao ny fomba hametrahana mpilalao mozika Onetouch manaitra an'i Alcatel
Androany izahay manome anao ny tutorial momba ny fomba fampidinana sy fametrahana ny mozika Onetouch Alcatel, ny Onetouch Music.
Ireo no anarana lahy sy vavy malaza indrindra amin'ny Tinder any Espana
Tinder dia namoaka ny lisitr'ireo anarana malaza indrindra ao amin'ny Tinder any Espana, na lahy na vavy. Mety hahagaga anao izy ireo.
Ahoana ny fametrahana ny Alcatel's Onetouch Launcher amin'ny Android rehetra
Androany izahay dia manome torolàlana azo ampiharina izay ampahafantarinay anao ny fomba fametrahana Alcatel's Ontouch Launcher amin'ny Android rehetra izay mihazakazaka Android 4.1 na avo kokoa.
Ireo lafin-javatra telo tsara indrindra amin'ny Gboard, ny klavie vaovao avy amin'i Google
Tonga amin'ny Android i Gboard ho fanavaozana ny Android 6.0 amin'ny Android Keyboard miaraka amina endrika vaovao telo tena lehibe izay asongadinay.
Instagram dia mamela anao hitahiry ny fidirana mba hanana lisitry ny tianao
Ny Instagram dia havaozina miaraka amin'ny fahafaha-mitahiry fidirana hijerena azy ireo avy eo amin'ny mombamomba ny kaontinao amin'ny findainao.
Afaka mivezivezy mivantana avy ao amin'ny Twitter tsy misy Periskope ianao izao
Vao nohavaozina ny Twitter mba hahafahanao mivezivezy mivantana tsy misy fametrahana ny app Periscope. Zava-baovao tsara ho an'ny fampiharana.
Material Circle, iray amin'ireo Live Wallpaper tsara indrindra ho an'ny Android
Androany aho dia manoro hevitra ny Material Circle, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo Live Wallpaper tsara indrindra ho an'ny Android sy ny fampiharana lamaody ao amin'ny Play Store.
WhatsApp dia hamela anao hamafa hafatra nalefa
Ny fanavaozana WhatsApp manaraka dia hitondra safidy tena mahaliana ao aminy, azontsika atao ny mamafa ireo hafatra nalefan'izy ireo tsy nahy.
Slack dia mampiditra ny antso an-tsary
Slack, ny fampiharana quintessential ho an'ny tetik'asa sy ny fitantanana ny vondrona asa, no nohavaozina tamin'ny kinova birao miaraka amin'ny fanohanan'ny antso an-tsary
Nova Launcher mankalaza ny faha-5.0 taonany miaraka amin'ny Pixel Launcher XNUMX Pixel
Mba hankalazana ny tsingerintaona fahadimy Nova Launcher dia navaozina farany tamin'ny endriny 5.0 miaraka amin'ny fiasa Pixel Launcher ary maro hafa.
Snapchat dia manolotra 'Groups' hatramin'ny olona 16 sy fitaovana famoronana vaovao
Miaraka amin'ireo 'Groups' na vondrona, azonao atao ny mifanakalo resaka sy atiny multimedia miaraka amin'ny olona 16 ao amin'ny Snapchat. Ampiana fitaovana famoronana vaovao.
[APK] Tonga amin'ny Play Store ihany ny hetsika Facebook
Manomboka androany dia azonao atao ny misintona ny fampiharana Facebook Events amin'ny Android, izay ahafahanao manatrika hetsika eo akaiky eo amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Ahoana ny fanahafana ny fiasa Memo Quick an'ny terminal LG amin'ny Android rehetra
Androany dia asehoko anao fa ny ahy no fampiharana tsara indrindra hanamboarana ny Memo Quick an'ny terminal LG amin'ny karazana Android.
Google Allo dia mihoatra ny 10 tapitrisa alaina ao amin'ny Google Play Store
Tao anatin'ny 5 andro dia nahazo fampidinana 5 tapitrisa izy, roa volana taty aoriana dia nahatratra 10 tapitrisa androany. Tsy fantatra ny hoavin'i Allo.
Ny rindranasa maimaim-poana tsara indrindra hijerena ny TV mivantana sy maimaim-poana, na dia mifanaraka amin'ny Google Chromecast sy ny firaketana ny programa aza
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena fahitalavitra mivantana, maimaimpoana ary ara-dalàna tanteraka, fampiharana izay mamela ny fandraketana programa mihitsy aza.
Skype Mpandika teny dia misy amin'ny antso ho an'ny finday sy ny zotram-pifandraisana
Skype Translator dia efa misy amin'ny Skype handika antso amin'ny fotoana tena izy rehefa atao amin'ny laharana finday sy finday izy ireo.
[APK] Gboard no kitendry vaovao an'i Google misy GIF, fikarohana ao anatiny ary maro hafa
Gboard dia tonga hanolo ny kitendry Android hampidirana ny fikarohana Google, handefasana GIF mihetsika sy maro hafa, izay mamarana ny endriny bebe kokoa
Iray amin'ireo fampiharana toetr'andro tsara indrindra
Androany dia te hizara aminareo rehetra aho fa ho ahy no iray amin'ireo fampiharana toetr'andro tsara indrindra ho an'ny Android.
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fanovana mozika sy feo
Fisafidianana ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanitsiana mozika sy fanapahana hira avy amin'ny finday na tablette Android anao. Tonga DJ
Horonantsary fiarahabana natokana ho an'ny Krismasy maimaimpoana, ataovy miarahaba ny olona tadiavinao i Santa Claus
Androany izahay dia manazava tsikelikely ny fomba famoronana horonantsary Krismasy natokana ho an'i Santa Claus maimaim-poana.
Ary farany, tsy hividy Souncloud i Spotify
Rehefa afaka dinika amam-bolana, Spotify ihany fa tsy hividy ny serivisy streaming Soundcloud sao matahotra sao hisy fiantraikany amin'ny IPO-ny
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny chat mifototra ary ny fidirana IFTTT
Ny fampidirana tanteraka ny IFTTT dia omena ao amin'ny Telegram. Rindrambaiko iray izay manavao ihany koa amin'ny chat mifatotra sy maro hafa amin'ny Android.
Google dia mahavita mampihena ny haben'ny fanavaozana 65% ao amin'ny Play Store
Ao amin'ny Play Store dia azontsika atao ny manavao ireo rindranasa mitahiry data maro be izay mahatratra 65% amin'ny salan'isa ankapobeny.
YouTube dia mandoa vola iray lavitrisa dolara, fa ny indostrian'ny mozika kosa dia maniry bebe kokoa
Nanambara i YouTube fa nandoa royaly mitentina iray tapitrisa dolara tamin'ny indostrian'ny mozika tamin'ny taona lasa, nefa toa tsy ampy izany
Chrome dia mamela anao hitahiry mozika, horonan-tsary ary pejy an-tserasera
Google dia nanavao ny Chrome mba hahafahanao mitahiry mozika, horonan-tsary ary pejin-tranonkala amin'ny fomba ivelan'ny Internet ary amin'izay dia jereo ny atiny isaky ny tianao.
Google dia mizaha toetra ny fizarana amin'ny fampiharana sy lalao video ao amin'ny Play Store
Ary farany, ary taorian'ny fiandrasana an-taonany maro, dia nanomboka ny fitsapana i Google mba hanasarahana izay fampiharana amin'ny lalao video ao amin'ny Google Play Store.
Afaka mijery sarimihetsika 4K avy amin'ny Google Play Store ianao izao
Avy amin'ny Google Play Store, efa atolotra amin'ny kalitao 4K ny sarimihetsika mba tsy halainao ny hatsaran'ny kalitaon'ny atiny multimedia rehetra.
[APK] Google Duo dia nohavaozina ho 5.0 miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny horonantsary
Duo dia fampiharana antso video vaovao izay nohavaozina amin'ny kinova 5.0 izay anatsarana ny kalitaon'ny famantarana video.
Google dia manandrana interface interface vaovao amin'ny Maps
Amin'izao fotoana izao, io interface interface vaovao io dia hitan'ny vondronà mpampiasa voafetra ao amin'ny Google Maps. Izy io dia navadika avy amin'ny lafiny server.
Ny fampiharana Google dia mizara ho fampiasa roa-kiheba hanavahana ny atiny
Fiovana mahaliana ho an'ny fampiharana Google izay mizara roa takelaka izao hanavahana ny atiny omeny.
Ampahafantaro ireo akaiky anao fa tsy maninona ianao amin'ny Contact Google Trusted
Google Contacts azo itokisana dia fampiharana hahafantarana raha tsy maninona ny namanao na ny fianakavianao amin'ny fampiasana geolocation.
Surfy Browser, tranonkala vaovao izay tsy maintsy fantatrao
Surfy Browser dia mpizaha tranonkala vaovao ho an'ny Android izay mitondra fiasa mahafinaritra ary manome traikefa nahafinaritra amin'ny tranonkala.
Ny Beta Apps dia manamora anao ny fidirana amin'ny app Google Play betas rehetra
Beta Apps dia fampiharana tsotra iray izay manome anao fidirana amin'ny betas rehetra an'ny apps izay ao amin'ny Google Play Store amin'izao fotoana izao.
Google On dia Google WiFi ankehitriny
Google dia manomboka mamoaka ny fanavaozana ny fampiharana Google On izay antsoina ankehitriny hoe Google WiFi ary mamela anao handrindra ireo fitaovana mitovy anarana
Google Keep dia nohavaozina miaraka amin'ny fahafaha-maka sary amin'ny sary
Ao amin'ny efijery fanaovana sary, Google Keep dia ahitana ny safidy "maka lahatsoratra avy amin'ny sary" hampita azy mivantana amin'ny naoty.
Mialoha ny Krismasy! Fampiharana hikarakarana ny fahasalamanao ary hihena
Androany dia miandrandra ny vokatry ny Krismasy izahay ary mitondra fampiharana telo ho anao izahay hampihenana ny lanjanay alohan'ny handraisana izany amin'ny sakafo be dia be miandry anao
SwiftKey mametraka ny lohahevitra rehetra andoavam-bola maimaim-poana
Raha mila klavie misy fanamboarana lehibe ianao, SwiftKey, amin'ny alàlan'ny famadihana ny lohahevitra rehetra aloa dia maimaim-poana, no tsara indrindra amin'izany.
Ahoana ny fomba filalaovana lalao Facebook Messenger Instant
Nandritra ny andro maromaro dia nanana ny safidy hidiranao amin'ny lisitry ny lalao video ao amin'ny Facebook Messenger ianao. Mampianatra anao hiditra amin'izy ireo izahay.
Google Play Store dia mampiasa interface vaovao ho an'ny valin'ny fikarohana
Google dia manatsara hatrany ary manampy endri-javatra vaovao amin'ny Google Play Store. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny valin'ny fikarohana.
Tonga amin'ny Android Auto ny fanohanan'ny baiko "OK Google"
Android Auto dia efa manomboka mahazo fanohanana ny baiko "Ok Google" mba hahafahanao mifanerasera amin'ny feonao rehefa mitondra fiara
Te hanova ny Facebook Messenger ho Western WeChat?
Isaky ny manampy endrika bebe kokoa ny Facebook Messenger ary isaky ny mandanja bebe kokoa ny fahatsiarovana anatiny ny findainao amin'ny faniriana hitovy amin'ny WeChat
HBO Spain dia efa manana fampiharana Android miaraka amina volana fitsapana maimaimpoana
Eto ny HBO Spain ary afaka ankafizina amin'ny smartphone / tablette Android izao. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tsy fahombiazana vitsivitsy amin'ny fitsapana voalohany.
[APK] Clip Layer no fampiharana vaovao an'i Microsoft handika lahatsoratra amin'ny solaitrabe
Clip Layer no fampiharana Microsoft vaovao izay hamela anao handika ny lahatsoratra rehetra anananao eo amin'ny efijery amin'ny fomba tsotra sy mora.
Smart Launcher Pro 3 amidy amina € 0,10 ihany
Raha mitady mpandefa fampiharana vaovao sy avo lenta ianao, dia azo amidy amidy € 3 ao amin'ny Google Play Store ny Smart Launcher Pro 0,10.
SwiftKey dia manamora ny fitehirizana sy fandefasana andian-tsoratra
Ho mora kokoa izao amin'ny SwiftKey ny mitahiry sy mandefa andian-tsoratra amin'ny alàlan'ny fananana ny fizotran'ny clipboard sy ny "hitsin-dàlana" na "teny fohy".
Mampitandrina ny pikantsary natao tamin'ny Tantara i Instagram
Raha maka pikantsary amin'ny Instagram ianao dia ho fantatry ny mpampiasa. Nefa mitandrema, satria ity fampiasa vaovao ity dia ho ampahany amin'ny Tantara ihany.
Fangatahana hijanona ho fampahalalana avy amin'ny fitaovanao Android
Androany izahay dia manome safidy anao miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra mba hampahalalana anao amin'ny fitaovanao Android
Vidio miaraka amin'ny TuLotero ny tapakilan'ny Noely Lotera anao ary milalao amina vondrona iray soa aman-tsara
Azonao atao ny mividy izany ampahafolon'ny Lotera Krismasy izany hizara izany amin'ny namanao na fianakavianao mora foana.
Ny lalao video sy zoma app Black Friday tsara indrindra ho an'ny Android
Raha mitady ny tolotra tsara indrindra amin'ny rindrambaiko sy lalao video ianao amin'ity zoma mainty ity anio ity, aza hadino ny fotoana nifanaovana tamin'ity fidirana ity izay angoninay fihenam-bidy.
Ny tsikera Play Store izao dia mampiseho isa amin'ny lafiny manokana amin'ny lalao
Mpampiasa marobe no mitatitra fa afaka manombatombana ny lafiny manan-danja indrindra amin'ny lalao ao amin'ny Play Store toa ny: gameplay, control and graphics
Fampiharana hianarana hitendry gitara
Te hianatra gitara ve ianao? Aza adino ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny findainao na ny takelaka izay hianaranao mitendry zavamaneno ity.
Ny fampiharana tsara indrindra hampihenana lanja
Te hihena ve ianao? Ampidino ireo rindranasa ireo mba hampihenana lanja amin'ny fampihetseham-batana tsara indrindra sy ny tolo-kevitra hahafahanao mamoy ireo kilao fanampiny ireo.
[APK] Havaozina i Spotify miaraka amin'ny bara fitetezana ambany kokoa
Spotify dia navaozina tamina zava-baovao iray manan-danja amin'ny alàlan'ny fanovana ny tontonana fitetezana ny sisiny ho an'ny bara fitetezana ambany.
Telegram dia nohavaozina amin'ny 3.14 miaraka amin'ny rohy 'Instant View', fanatsarana ny interface ary maro hafa
Telegram dia manana fanavaozana lehibe amin'ny andiany 3.14 miaraka amina andiam-panatsarana toa ny fijerena haingana miaraka amin'ny "Instant View"
Tonga DJ tena izy miaraka amin'i edjing PRO, ny app tsara indrindra amin'ny fampifangaroana mozika elektronika
Raha mitady fampiharana ianao hanombohana amin'ny tontolon'ny fifangaroana sy ny DJing, edjing PRO dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaovana izany. Amidy amina € 0,10 ankehitriny
WhatsApp dia manandrana andrana amin'ny streaming video
WhatsApp dia manandrana mandefa horonantsary amin'ny andrana andrana any India ka maro ny horonantsary alaina amin'ny fahatsiarovan'ny telefaona.
Volume scheduler dia mametraka fandaharam-potoana ho an'ny haavon'ny haavon'ny findainao
Volume scheduler dia rindranasa vaovao ahafahanao mandahatra ambaratonga isan'ora mba hanitsiana azy ireo ho azy
Ny Time Buddy dia miandraikitra ny fampisehoana aminao ny kalandrie misy anao amin'ny faritra hafa
Raha te hanana fifehezana bebe kokoa ianao mandritra ny ora maro izay ny hetsika tsy maintsy hatrehinao manerantany, Time Buddy dia ho anao.
Google Maps dia hilaza aminao rehefa feno amin'ny fotoana tena izy ny toerana
Tsy ho ela dia ho afaka hahafantatra amin'ny Google Maps ianao rehefa feno tanteraka ny fivarotana na trano fisakafoanana iray hisorohana azy ireo amin'ny dianao miantsena.
[APK] havaozina amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlan'ny fampiharana sy ny kisary boribory ny YouTube
Ary farany, nohavaozina ny YouTube hampihatra ireo hitsin-dalana na hitsin-dàlana hidirana amin'ny fironana, famandrihana ary fikarohana
GoEuro dia manampy anao hahita ny tolotra tsara aleha
GoEuro no fampiharana tsara indrindra amin'ny fitadiavana dia mora amin'ny fitsangatsanganana sidina miaraka amin'ny tapakilan'ny lamasinina sy bus. Ary tadiavo hatrany ny tolotra tsara indrindra!
Nanambara ny sehatra votoatiny vaovao i Amazon (mihorohoro ny fifaninanana)
Mandrahona ihany koa i Amazon fa handray ny ankamaroan'ny mpanjifa atiny streaming. Amin'ny volana ho avy dia ho fantatray ny sehatra vaovao.
Facebook dia mandray 20% ny baterin'ny terminal anao isan'andro
Tsy vitan'ny hoe mahavita mampiasa bateria be loatra izy, hatramin'ny 20% isan'andro, fa mampihena ny terminal ihany koa amin'ny fandaniana loharano be loatra.
Ny signal izao dia manamora ny fanamarinana ny tsiambaratelon'ireo resanao
Signal dia rindrambaiko iray mifantoka amin'ny tsiambaratelon'ny hafatra ary ankehitriny rehefa mampihatra fepetra bebe kokoa amin'izany iraka izany izy
Sintomy izao ny kinova vaovao an'ny Play Store miaraka amin'ny endrika nohavaozina tanteraka
Androany izahay dia mampianatra anao ny fampidinana ny kinova vaovao avy amin'ny Google Play Store mba hahafahanao mankafy azy io alohan'ny hanavaozan'ny Google azy.
Ny tambajotra sosialy Yik Yak dia azo ampiasaina any Espana ankehitriny
Tonga tany Espana i Yik Yak, tambajotra sosialy tena mahomby any Etazonia izay mampifandray ireo mpampiasa amin'ny olona akaiky azy ireo.
YouTube Kids izao mamela ny ray aman-dreny hanakana horonantsary sy fantsona
Nohavaozina ny YouTube Kids miaraka amina endrika mahaliana ho an'ny ray aman-dreny, izay ahafahan'izy ireo manakana horonan-tsary sy fantsona.
Google Play Newsstand dia nivadika ho fianarana milina hanolorany tantara
Google Play Newsstand dia mandeha amin'ny fianarana milina sy famolavolana vaovao izay afaka manome fanavaozana lehibe ho an'ity fampiharana ity ho an'ny vaovao, boky ary magazine
Midira amin'ny Puzzles crossword New York Times avy amin'ny fampiharana ofisialy
Ny fampiharana crossword New York Times dia efa hita ao amin'ny iOS sy Windows Phone nandritra ny fotoana kelikely, izao no fotoana ho an'ny Android.
Ahoana ny fomba hanafenana sary avy amin'ny Android handefasana azy ireo soa aman-tsara (ary koa hafatra)
Androany aho dia mampianatra anao ny fomba fanaovana encrypt sary amin'ny Android, sary sy hafatra an-tsoratra mba handefasana soa aman-tsara amin'ny alàlan'ny mailaka na fampiharana fandefasan-kafatra.
Fampiharana Google 4 izay tsy azonao adino
Ireto fampiharana Google 4 ireto dia iraisana ihany fa novolavolain'ny G lehibe ary manana kalitao tsara amin'ny ambaratonga rehetra izy ireo.
Pulse dia rindrambaiko vaovao ho an'ny SMS miaraka amina fampifanarahana amin'ny alàlan'ny fitaovana Pushbullet-karazany
Pulse dia fampiharana vaovao ho an'ny SMS izay afaka ampifanarahana amin'ny fitaovana maro hitantanana ireo karazana hafatra ireo.
Ampidino amin'ny Android Android ny adalàn'ny El Hormiguero, sahy manandrana azy ve ianao?
Androany izahay mitondra anao ao amin'ny fizarana Humor Android, fampiharana maimaim-poana izay hanahafana an'i idiotizador an'i Pablo Motos Hormiguero mivantana amin'ny Android-nao.
Twitter mandefa kaody QR ho an'ny mombamomba an'i Snapchat
Ny Twitter dia nohavaozina miaraka amina endrika tena manaitra ary io no fahaizana mamorona kaody QR anao manokana izay azonao ampiasaina hanarahana azy
Ahoana ny fomba fampidinana apps amin'ny Play Store nefa tsy manana kaonty Google
Ampidiro ary fantaro ny fomba fampidinana ireo rindranasa ao amin'ny magazay Play Store nefa tsy mila mamorona kaonty Google ianao.
Ahoana ny fanidiana soa aman-tsara ny Android anao sy amin'ny hidin-trano fanoherana ny zaza
Hidio soa aman-tsara ny Android-nao ary hidy miaraka amin'ny hidin-trano fanoherana ny zaza mba hisorohana ny famadihana ny terminal na ny fampiasana tsy mety ataon'ny ankizy kely ao an-trano.
Rindrambaiko 4 tsara ho an'ny retouching sary amin'ny Android
Raha mitady rindrambaiko vaovao hafa ianao amin'ny famerenana sary sary ary hahafantatra ny sasany amin'ireo nohamasinina, azo antoka fa azo ampiasaina ity lisitry ny 4 ity.
Vahaolana Android ho an'ny tranainy indrindra ao an-trano
Androany izahay manome anao ny vahaolana Android tsara indrindra ho an'ny antitra ao an-trano, mpandefa manokana ary vahaolana manokana.
MAHATALANJONA!! Ahoana ny fomba hifehezana ny Android amin'ny feonao
Androany dia asehoko anao ny fomba fampiasana Android amin'ny feonao hanao zavatra tsy mila mikasika ny terminal mihitsy, manan-kery na dia ny mandefa WhatsApp aza.
Google Allo dia nohavaozina miaraka amin'ny fahafahany maminavina emoji mifototra amin'ny toe-javatra
Rehefa manoratra hafatra ao amin'ny Google Allo ianao dia azonao atao ny misafidy "Smart Smiley" ho an'ny fampiharana hisafidianana emoji araka ny fanoratanao.
I Todoist dia efa mamela ny fandaharam-potoana "mahira-tsaina" noho ny fahakingan-tsaina artifisialy
Todoist dia havaozina androany miaraka amin'ny fiasa antsoina hoe Smart scheduling izay ahafahan'ny fitantanana asa mandeha ho azy.
Ahoana ny fomba fampiasana horonan-tsary ho toy ny sary mihetsika
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehoko anao amin'ny fomba tena tsotra ny fomba fampiasana ny horonan-tsary ho toy ny sary miaina Animated ho an'ny Android.
Google Photos dia manatsara ny fitaovany fanovana amin'ny kinova vaovao
Google Photos dia manampy sivana vaovao mifototra amin'ny fianarana milina hanatsarana ireo sary rehetra alainao amin'ny finday finday avo lenta ireo.
Google dia mampiditra ny fandikana milina neural ao amin'ny Mpandika azy
Google Translate izao dia mampiasa an'io fianarana milina io sy ny neural mba hamokarana vokatra tsara kokoa amin'ny fandikan-teny.
[APK] PhotoScan, ilay fampiharana Google vaovao izay mampiasa sary computational mba hijerena sary
Photoscan no fampiharana vaovao hijerena sary mampiasa sary computational hahazoana vokatra tsara indrindra
Ahoana ny fomba hanomezanao fiarovana fanampiny Android
Androany dia hasehoko anao ny fomba hanomezana fiarovana fanampiny Android anao amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo rindranasa tsirairay ary hisorohana ny fidirana amin'ireo fikirana Android.
CM Launcher izao dia azon'ny rehetra mivantana avy amin'ny Google Play Store
Izahay dia efa manana CM Launcher ho an'ny rehetra, ary ny Cyanogenmod Launcher manaitra izao dia azo sintonina avy amin'ny Google Play Store
CamFinger dia hanampy anao hahafantatra ilay ID tsy manam-paharoa amin'ny fakan-tsarimihetsika findainao
CamFinger dia rindrambaiko iray ahafahanao mahafantatra ny ID tsy manam-paharoa amin'ny fakan-tsarobidinao. Fampiharana iray izay mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny fakantsarinao.
Arrow Launcher nohavaozina miaraka amina safidy fanaingoana vaovao sy maro hafa
Arrow Launcher dia mahazo fanavaozana vaovao izay manatsara ny fitantanana fitadidiana, manolotra fanohanana ireo hitsin-dàlan'ny app sy maro hafa.
Ahoana ny fomba hijerena baolina kitra maimaimpoana sy ireo fantsom-pahitalavitra rehetra any Espana AZO ITY !!
Androany izahay dia mampiseho aminao ny fampiharana tsara indrindra hijerena maimaimpoana ny baolina kitra, fampiharana izay miasa tanteraka ary mamela antsika hijery maimaimpoana ny fantsona plus.
Azo alaina amin'ny antso an-tsary rehetra amin'ny WhatsApp izy ireo
WhatsApp dia nandefa ny antso an-tsary ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny iOS, Android ary Windows Phone hiditra farany mba hifaninana amin'ny Skype sy ny hafa.
Ahoana ny fomba hanomezana ny fisehoan'ny iPhone 7 amin'ny Android anao: foibe fanidiana sy fanaraha-maso ny mpandefa
Androany aho mitondra fampiharana maimaim-poana telo ho anao izay hanome ny fisehoan'ny iPhone 7 amin'ny terminal Android anao, maimaim-poana izany ary tsy misy Root.
Wizapet, fampiharana hikarohana biby fiompy very
Manolotra anao Wizapet, fampiharana natolotry ny mpiambina sivily hanampy anao hikaroka biby fiompy very (na hahita ny tompony).
Ahoana ny fomba hanoratana ireo fampiharana Android amin'ny fomba mora indrindra
Anio dia asehonay anao tsikelikely ary amin'ny fomba tena tsotra ny fomba hanefy ireo rindrambaiko Android sy hahafahana mampiasa azy ireo miaraka amin'ny kaonty mpampiasa samihafa
PAIRS no fomba tsara indrindra hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana WiFi sy Bluetooth aorian'ny famafana ny findainao
Mampianatra anao izahay hanao sy hamerina amin'ny laoniny ny nomaniny ho solon'izay WiFi sy Bluetooth tambajotra izay notehirizinao tamin'ny fitaovana Android anao.
Google Play Music dia mahazo fanamboarana mifototra amin'ny konteks
Hanjary fironana hafa ny tontolon-kevitra ary manana fananana lehibe manohana azy i Google miaraka amin'ny Play Music izay hifantoka amin'izany.
Hiverina sy hihamafy ny fampiharana Secret miafina
Ny tsiambaratelo dia fampiharana izay notohizana satria ny hevitra niandohany dia tsy ilay noforoniny tamin'ny farany rehefa tonga teny amin'ny tsena. Miverena amin-kery izao.
«Fingerprint Gestures», ny fiasa manokana an'ny Pixel izao amin'ny Android-nao
Fingerprint Gestures dia fampiharana izay mitondra an'io fampiasa manokana an'ny Google Pixel io amin'ny fitaovana misy Android 6.0 Marshmallow
Nanamafy ny Instagram fa miasa amin'ny Live Video izy io
Tsy ho ela ny Instagram dia hanatevin-daharana ny fiaran-dalamby haingam-pandeha mivantana toy ny Facebook na Periscope.
Google Arts & Culture VR dia efa hita ao amin'ny Play Store
Google Arts & Culture VR dia fampiharana vaovao ho an'ny solomaso Daydream izay mitondra zava-kanto erak'izao tontolo izao amin'ny traikefa vaovao
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho lasa HTC amin'ny alàlan'ny fametrahana HTC Sense 7 sy ireo fampiharana HTC rehetra
Androany dia asehoko anao ny fomba fanovana ny Android ho lasa HTC amin'ny alàlan'ny fametrahana HTC Sense 7 miaraka amin'ny Blinkfeed miasa tanteraka sy ireo fampiharana HTC tompon-tany rehetra.
WhatsApp dia efa manana fanamarinana 2-dingana sy playback naoty an-peo any aoriana
Ny fanamarinana 2-dingana dia ahafahanao mametraka sakana misimisy kokoa ary ny famoahana naoty feo any aoriana dia ireo zava-baovao roa an'ny WhatsApp
Ahoana ny fifehezana sy fanovana ny jiro amin'ny bokotra Samsung Galaxy S7 anao, manan-kery ho an'ny Galaxy rehetra ary tsy misy Root
Anio dia asehonay anao ny vahaolana voafaritra hifehezana sy hanovana ny jiro amin'ny bokotra Samsung Galaxy S7, S6, S5, sns, sns.
Azo alaina izao ny fampiharana DayDream sy YouTube VR ho an'ny Android
Raha tsara vintana ianao manana Pixel, dia azonao atao izao ny mampiasa DayDream avy amin'ny Play Store, ny ambiny dia efa manana YouTube VR izahay.
Adobe Lightroom for Android dia mahazo tohana RAW feno
Ary farany, izahay dia manohana tanteraka ny endrika RAW amin'ny sary Android amin'ny iray amin'ireo fampiharana fanovana tsara indrindra: Adobe Lightroom
Izay rehetra atolotry ny Android Auto antsika, mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth rehetra izao
Raha te hahafantatra izay rehetra atolotry ny Android Auto anay amin'ny kinova 2.0.642 izy, izay mifanaraka amin'ny fiara rehetra ankehitriny, dia tsy tokony halahelo ity lahatsoratra ity ianao.
Fampiharana vaovao lehibe 3 avy amin'ny Adobe ho an'ny famolavolana, famoronana ary fanaovana sary
Natambatr'i Adobe ireo batery ary nasehony anay fa hainy ny manamboatra rindrambaiko mahafinaritra toa ny Sketch, Comp CC ary Fix
Ny fampiharana tsara indrindra hampidinana boky maimaim-poana amin'ny fomba ara-dalàna tanteraka
Androany dia tiako ny manolotra anao ilay iray izay ho ahy sy ho an'ny maro no fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android mety amintsika ...
Nanangana clone Snapchat tao amin'ny tsena vao misondrotra ny Facebook
Facebook dia manana tsilo amin'ny fomba miaraka amin'i Snapchat, ary ankehitriny dia nandefa klone antsoina hoe Flash amin'ny tsena vao misondrotra; fampiharana ampifanarahana amin'ireo firenena ireo
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Android Auto
Raha diso fanantenana ianao satria tsy mifanaraka amin'ny fiaranao ny Android Auto, dia aza kivy satria mitondra anao ny safidy tsara indrindra ho an'ny Android Auto.
Ahoana ny fomba filalaovana horonantsary You Tube amin'ny fàfana
Anio dia manome anao ny vahaolana izahay hahafahanao manohy milalao horonantsary You Tube miaraka amin'ny efijery. Fiasa mety amin'ny fihainoana mozika avy amin'ny You Tube.
[APK] Android Auto dia azo alaina amin'ny rehetra izao
Android Auto dia azo alaina ho an'izay rehetra manana finday avo lenta na takelaka misy Android 5.0 na avo kokoa hahafahana mahazo vaovao, mozika sy maro hafa
Araho ny fisehoana mandrakariva amin'ny S7 sy LG G5 noho ity fampiharana maimaimpoana ity
Androany izahay mitondra fampiharana maimaim-poana sy tsotra tanteraka izay misy anahafana ny foana amin'ny fampisehoana ny S7 sy ny LG G5 amin'ny Android rehetra.
Ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe HQ Music ho an'ny Android 7.0 ary maimaim-poana izany
Androany no itondrako anao izay ho an'ny maro no mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao, mpilalao iray izay hanaitra anao sy hanaitra anao.
Tonga amin'ny Android ihany i Microsoft Selfie
Microsoft Selfie dia rindrambaiko vaovao natao manokana ho an'ireo fakana sary izay nalaina tamin'ny fakantsary anoloana ny fitaovana finday.
Google Play dia hilaza aminao ny fironana amin'ny mozika, sarimihetsika ary maro hafa
Google Play Store dia misy safidy vaovao ahafahanao mahita ny fironana ankehitriny mifandraika amin'ny mozika, sinema na maro hafa.
Fingerprint Actions dia ahafahanao manome fitaovana hafa ho an'ny mpamaky ny rantsan-tànanao Android
Anio dia asehonay aminao ny fomba hanomezana fitaovana hafa ho an'ny mpamaky rantsan-tànanao Android, amin'ny alàlan'ny fampidinana sy fametrahana fampiharana tsotra fotsiny
Ny sary Vector dia mandondona eo am-baravaran'ny findainao miaraka amin'ny Adobe Illustrator Draw
Raha mitady fitaovana fanaovana sary ve ianao, ilay iray nantsoin'i Adobe hoe Draw nandritra ny fotoana elaela, dia mahatalanjona fotsiny.
[APK] Sintomy ary apetraho ny fampiharana rakibolana tsara indrindra ho an'ny Android
Androany izahay manome anao apk mpamaly faty izay tianay hizara ny fahalalana sy ny fahalalana ny fampiharana rakibolana tsara indrindra ho an'ny Android.
Ny fampiharana tsara indrindra hanaovana pranks an-tariby
Topazo maso ireo safidinay ny fampiharana tsara indrindra hanaovana pranks an-tariby. Raha te hanana fotoana mahafinaritra ianao dia mifidiana iray amin'ireo tolo-kevitray.
Ampirisihina ny WhatsApp ary mandeha amin'ny fironana Snapchat, Instagram, Twitter sy ny maro hafa izy
Tsy nijanona ny WhatsApp ary manomboka amin'ny beta ny fahafahany mampiseho tantara amin'ny alàlan'ny tabilao "status".
Google Play Store izao dia mamela ny mpamorona hanolotra fihenam-bidy amin'ny famandrihana
Ny G lehibe dia te hanampy ny mpamorona ary izany no antony namelany ny fihenam-bidy ampiharina amin'ny fampiharana amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny Google Play.
Fampiharana tena ilaina iray hahatonga ny Android clipboard hamokatra bebe kokoa
Androany aho mitondra anao iray amin'ireo rindranasa tsy mampino ho an'ny Android na fitaovana tena ilaina izay hanomezana vokatra lehibe kokoa ny takelaka Android
iOS 9 Launcher, Apple traikefa amin'ny Android
Androany izahay manome anao Android Launcher vaovao, iOS 9 Launcher izay manome antsika traikefa amin'ny iOS nefa tsy mila mahafoy ny fampiasa sy ny fahaizan'ny Android
Manazava sy manatsara ny endrikao amin'ny fampiharana vaovao mahatalanjona avy amin'ny Adobe antsoina hoe Photoshop Fix
Photoshop Fix no fampiharana Adobe vaovao izay manana andiana fitaovana matanjaka be hanovana sy hanatsarana tarehy.
LastPass mpitantana teny miafina lasa maimaim-poana tanteraka
https://youtu.be/Nn-viIGQSsM Justamente en el mes de agosto del verano pasado, el gesto de contraseñas LastPass anunció que permitiría a los…
Sideline, fampiharana tsy hampiasa ny tena nomeraonao
Sideline dia fampiharana mamela anao hamorona isa faharoa ary hitahiry izany ny nomeraonao, raha tsy tianao ny hanome azy.
Leena Desktop dia mpandefa iray izay mitondra ny traikefa amin'ny birao amin'ny Android-nao
Raha mitady rindranasa iray izay manome traikefa amin'ny birao amin'ny fitaovana Android anao ianao dia mety tsara amin'izany i Leena Desktop.
Flow no valintenin'i Microsoft amin'ny IFTTT; Misy izao
Manatevin-daharana ny fifaninanana mifanohitra amin'ny IFTTT i Microsoft miaraka amin'ny serivisy sy ny fampiharana azy manokana antsoina hoe Flow. Azo alaina maimaimpoana amin'ny Android, iOS ary amin'ny tranonkala.
Adobe dia namoaka Photoshop Sketch sy Comp CC tamin'ny Android
Adobe dia namoaka rindrambaiko famolavolana vaovao roa ao amin'ny Google Play Store: Sketch sy Comp CC. Rindrambaiko vaovao roa miaraka amin'ny fanavaozana ny Illustrator
[APK] Hangouts kinova 14 manampy hitsin-dàlana amin'ny 7.1 sy maro hafa
Nohavaozina araka ny tokony ho izy ny Hangouts ao amin'ny andiany 14 miaraka amin'ireo hitsin-dàlana mifanentana 7.1 sy ireo mpandefa fironana.
[APK] Ny alpha Twitter farany dia mitondra hitsin-dàlana, varavarankely marobe ho an'ny Nougat ary kisary boribory
Ny kinova alpha an'ny Twitter dia mitondra ny hitsin-dàlan'ny fampiharana, ny fanohanana am-baravarankely ary ny kisary boribory vaovao.
Ahoana ny fananana ny sary miaina 'Live Earth' an'ny Pixel amin'ny Android-nao
Raha te hanana ny sary miaina 'Live Earth' an'ny Google Pixel ianao, dia mankanesa amin'ity lahatsoratra ity ahafahanao mametraka azy ireo.
Niresaka tamin'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana roa momba ny malware Android izahay
Miresaka amin'i Josep Albourd sy Raphael Labaca izahay, manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny malware izay hanokatra ny masonay ny maha-zava-dehibe ny antivirus ho an'ny Android
Ahoana ny fomba fampidinana hira avy amin'ny Spotify Premium
Asehonay aminao ny fomba fampidinana hira na playlists amin'ny fampiasana Spotify Premium hahafahana mampiasa azy amin'ny telefaona finday
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Vine ankehitriny fa hanjavona izany
Ankehitriny rehefa hanjavona amin'ny alàlan'ny alàlan'ny Twitter i Vine, dia tsy maintsy mitady fomba fampidinana ireo horonantsary 6 segondra ianao.
Nova Launcher 5.0 beta manampy ny hitsin-dàlan'ny Pixel Launcher
Raha manana Android Marshmallow ianao na avo kokoa dia azonao atao ny miditra amin'ny sisin-dàlana fampiharana Android 7.1 Nougat avy amin'ny Nova Launcher beta.
Clock Digital Live Wallpaper maimaim-poana
Anio dia asehoko anao ny Live Wallpaper Digital Clock manaitra izay miasa ho Widget Desktop fa misy amin'ny birao rehetra.
Ny fampiharana mampatahotra indrindra amin'ny Halloween
Izahay dia mitondra anao ny lisitry ny fampiharana mampatahotra indrindra amin'ny Halloween. Amin'ireo fampiharana ireo dia azonao atao ny manamboatra ny telefaona Android ho an'ny Halloween
Ahoana ny fomba hankafizana ny tontonana fanaraha-maso haingana an'ny iOS-Style
Androany aho dia manazava ny fomba hananana tontonana fanaraha-maso haingana amin'ny endriny iOS madio indrindra an'ny Apple sy ny iPhone ary ny iPads rehetra nefa tsy mila Root.
[APK] Allo 2.0 manampy valiny mivantana, Direct Share, fanohanan'ny GIF fitendry ary maro hafa
Misedra fotoan-tsarotra i Allo ary tsy maintsy hamoaka vaovao bebe kokoa i Google mba hanaovana azy ho fampiharana manintona kokoa. Izy io dia havaozina amin'ny 2.0
Ny tambajotra sosialy lamaody, Trendy, dia efa manana ny fampiharana ho an'ny Android
Trendy, ny tambajotra sosialy amin'ny fividianana, fivarotana ary fampiroboroboana ny vokatra amin'ny fironana lamaody farany izao dia manana ny Android app.
Todoist dia manampy fanampiana marobe amin'ny varavarankely, amin'ny fikarohana ao amin'ny Apps, ampio haingana amin'ny fampandrenesana sy maro hafa
Tsy nandany fotoana be i Todoist ary nohavaozina araka ny tokony ho izy mba hamoahana ny vaovao mifandraika amin'ny Android 7.1 Nougat.
Bara baterian'ny Cyanogenmod ho an'ny Android rehetra
Androany dia asehoko anao ny fomba fametrahana ny bara bateria Cyanogenmod amin'ny karazana Android terminal ary tsy mila Root.
[SOLUTION] bokotra Android tapaka na tsy mandeha amin'ny laoniny
Anio dia omenay anao ny vahaolana voafaritra tsara amin'ireo bokotra Android ireo izay tapaka na tonta rehefa mandeha ny fotoana ary manomboka tsy mandeha amin'ny laoniny.
Fanavaozana Skype miaraka amina antso sy voicemail nohatsaraina
Skype dia nohavaozina na amin'ny Android na amin'ny iOS hanatsarana ny antso sy ny mailaka. Fanavaozana kely nefa mahaliana.
Facebook dia mamorona rindranasa horonan-tsarimihetsika Prism amin'ny karazana Prism
Tsy ho ela ny Facebook dia handefa fampiharana horonantsary amin'ny fotoana tena izy izay mitovy be amin'i Prisma noho ireo sivana zavakanto ampiharina
Vetivety dia afaka maka iMessage ho an'ny Android ianao
Ny tsaho dia tena eo indray miaraka amin'ny hevitra fa tsy ho ela dia hametraka iMessage amin'ny Android isika. Hevitra tena marina indray.
Google Play Services dia nohavaozina miaraka amina endri-javatra vaovao sy fanatsarana vaovao
Google Play Services dia iray amin'ireo fampiharana mamela antsika hanao hetsika isan'andro nefa tsy fantatsika fa noho io fampiharana io no nahatonga izany
Hita amin'ny WhatsApp izao ny antso an-tsary, na dia ho an'ny mpampiasa sasany ihany
Ao amin'ny WhatsApp beta dia efa misy ny antso an-tsary mba hahafahanao mifandray amin'ireo namana sy fianakaviana amin'ny alàlan'ny horonan-tsary
LibreTorrent dia loharano misokatra sy mpanjifa tsy misy doka tonga lafatra ho an'ny Android
Mpanjifa torrent ho an'ny Android izay mampiasa loharano misokatra sy tsy misy doka hampisehoana ny fomba fanaovana zavatra.
Ny fitendry Android 7.1 dia manafina fitaovana iray hikarohana GIF
Mitovy amin'ny Telegram sy Facebook Messenger, ny kitapom-batana Android 7.1 dia misy ny fahaizana mitady GIF mihetsika.
Ny Live Wallpaper tsara indrindra hankafizanao tanteraka ity Halloween 2016 ity
Androany izahay dia manome anao safidin'ireo fampiharana miaraka amin'ireo Live Wallpaper tsara indrindra hankafizanao ny fety Halloween 2016 arak'izay sahaza azy
Fampiharana tsara indrindra hanaovana fiarahabana tratry ny tsingerintaona nahaterahana
Mila manao firariantsoa ve ianao? Jereo ny fampiharana Android tsara indrindra maniry firariana tsingerintaona nahaterahan'ilay olona tianao.
Raiso ny mozika tsara indrindra isaky ny Alatsinainy miaraka amin'ny Noon Pacific, serivisy manetriketrika sy minimalista
Noon Pacific dia serivisy mozika miadidy ny "curating" mozika tsara indrindra ahafahana manome izany ho anao isaky ny alatsinainy amin'ny alàlan'ny finday Android-nao.
Ny fampiharana tsara indrindra hanampiana ny sary dia antsoina hoe SKRWT ary amidy ao amin'ny Play Store ankehitriny
Androany izahay dia manolotra sy manome soso-kevitra ny SKRWT izay ho an'ny maro no fampiharana tsara indrindra manampy sary ho an'ny sarinao Android.
Ahoana ny fahazoana miditra amin'ny tontonana fampandrenesana avy amin'ny sensor sensor toy ny Pixel
Raha te hanana ny iray amin'ireo endrika mampiavaka an'i Pixel ianao dia mampiasa fihetsika amin'ny fantsom-panaovana rantsan-tànana ity, apetraho ity app ity.
Azonao atao izao ny manamarina ny fomba fijerin'ny tatoazy eo amin'ny hoditrao noho ny Android anao
Amin'ity fampiharana maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android ity dia azonao atao izao ny manamarina ny fomba hijerena ny tatoazy eo amin'ny hoditrao alohan'ny hanaovana tatoazy azy.
Polarr dia mpamoaka sary matanjaka izay mifantoka amin'ny sivana
Raha mitady safidy hafa amin'ny Snapseed, VSCO na Prisma ianao, Polarr dia fampiharana mahaliana kokoa noho ny fanovana sary izay tsy azonao adino.
[APK] Fanavaozana vaovao ao amin'ny Google Keep izay ahafahanao manisy pinins sy mampiasa hitsin-dàlana
Google Keep dia havaozina androany mba hanolotra ny fahaizana manisy fanamarihana ary manohana ireo hitsin-dàlan'ny fampiharana na hitsin-dàlana amin'ny birao
Fampiharana Google vaovao momba ny fitantanana ireo sary: ​​Wallpapers
Ny Wallpapers dia ny fampiharana Google vaovao mba hanananao ny sary ofisialy rehetra tonga amin'ny kinova Android
Ny sary masina mahatalanjona dia mamela anao hampiasa fonosana kisary amin'ny mpandefa Android
Raha toa ka tsy mamela anao hampiditra fonosana kisary ny mpandefitra default anao, ny sosona manokana an'ny findainao Android, kisary Awesome no valiny.
AutoRAP na ny fomba famoronana RAPS mahafinaritra amin'ny fomba tena tsotra
Androany izahay dia manome soso-kevitra fampiharana manaitra ho an'ny Android izay hahafahantsika mamorona RAPS mahafinaritra hamonjy sy hihaino izay rehetra tadiavintsika.
EaseUS MobiSaver ho an'ny Android dia hanampy anao hamerina sary sy horonantsary voafafa avy amin'ny fitaovanao Android
Miaraka amin'ny EaseUS MobiSaver ho an'ny Android dia azonao atao ny mamerina sary, horonantsary na antontan-taratasy izay nesorinao tsy nahy tamin'ny findainao Android.
Google mandefa ny kinova fanandramana indrindra amin'ny tranokalan'ny findainy: Chrome Canary
Chrome Canary no kinova fanandramana indrindra sy toerana hanaovana andrana amin'ny zava-baovao manaraka izay ho tonga amin'ny tranokala Google.
[APK] Sintomy sy apetaho ny Boost +, ny optimista Android an'ny HTC izay efa azon'ny rehetra izao
Androany dia te hizara aminareo rehetra aho hoe inona ho an'ny maro no fanatsarana Android tsara indrindra, fampiharana HTC antsoina hoe Boost +.
Fampiharana maimaim-poana tena tsara amin'ny sary an-tsary mivantana misy ny rano
Androany aho te hizara aminareo rehetra fampiharana tena tsara maimaimpoana hampiharana ny sary mivantana mivantana misy vokany amin'ny rano.
Infojobs, ilay fampiharana ilaina hitadiavana asa
Androany izahay dia te-hamporisika ny fampiharana tsara indrindra hahitana asa amin'ny terminal Android anao. Ny fampiharana dia tsy iza fa ny Infojobs.net.
Noho ny rindrambaiko iray dia naveriny ilay finday finday nangalariny.
Noho ny fangatahana fanoherana ny halatra napetraka tamina telefaona nangalarina dia afaka nisambotra ny mpanoratra ny polisy ary namerina ilay terminal tany amin'ny tompony
Google Maps for Android izao dia mampiseho anao fifamoivoizana eo akaiky eo amin'ny hitsin-dàlana amin'ny desktop
Google Maps ao amin'ny beta farany navoakany dia nanisy fampiasa vaovao: hitsin-dàlana hahalalanao ny trangan-javatra, ny fanairana ary ny mombamomba ny fifamoivoizana
Battlefield Companion dia azo alaina amin'ny traikefa Battlelog finday natsangana
Ny Electronic Arts dia nametraka ny batery ary nanangana Battlefield Companion nohatsaraina mba hahafahanao mankafy bebe kokoa amin'ireo lohateny roa an'ny Battlefield
[APK] Fanavaozana vaovao izay manatsara ny batterie amin'ny Display On foana ho an'ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7
Azonao atao izao ny misintona ny APK ny fanavaozana ny foana amin'ny fampisehoana izay manatsara ny fanjifana bateria an'io fiasa io amin'ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7
Ny sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny efijery AMOLED sy SuperAMOLED
Androany aho te-hanoro izay ho ahy no fampiharana tsara indrindra hahazoana sary ho an'ny efijery AMOLED sy SuperAMOLED.
Ahoana ny fomba hamonoana ny efijery finday avo lenta amin'ny sensor sensor
Miaraka amin'ity rindrambaiko novolavolain'ny mpampiasa iray ity ary natsangana tamin'ny XDA Forums, azonao atao ny mamono ny efijery finday avoakan'ny finday miaraka amin'ny sensor sensor
SwiftKey Beta dia havaozina amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana an-tsoratra namboarina, maodely incognito ary zana-tsipìka ao amin'ny maody takelaka
Ny fanavaozam-baovao SwiftKey Beta dia manolotra mode incognito, hitsin-dalana fohy nitarina ary daty ho an'ny maody takelaka.
Ny algorithm vaovao an'ny sary nataon'i Tinder dia hanampy anao hilalao bebe kokoa
Tinder izao dia misy safidy vaovao hanampy anao hisafidy ilay sary hitan'ny olona mahita ny mombamomba anao indrindra hanampy anao hanadala bebe kokoa.
Flychat, ny Messenger miboiboika ho an'ny WhatsApp, Telegram, Hangouts, Skype, sns, sns ... ..
Androany dia manolotra ny Flychat ho anao izahay, ilay fampiharana izay mitondra anao miboiboika Messenger ho an'ny WhatsApp, Telegram, Skype, Line ary fampiharana hafa mitovitovy amin'izany
[APK] Ahoana ny fisian'ny fampiharana Pixel Camera amin'ny fitaovanao amin'ny Android 7.0+
Raha manana fitaovana Android manana Nougat 7.0 na avo kokoa ianao dia azonao atao ny mahazo ny APK an'ny Google Camera ho an'ny Google Pixel irery.
Ny modely AndroidN-ify an'i Xposed dia mitondra ny Google Assistant amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'i Marshmallow
Google Assistant dia mety ho anao amin'ny finday avo lenta amin'ny ROOT sy Marshmallow noho ny modely AndroidN-ify izay nohavaozina androany.
[APK] Sintomy ny app Google Pixel Phone izao amin'ny Nexus na ny terminal misy CM
Raha manana Nexus na fitaovana misy CyanogenMod ianao dia azonao atao ny misintona ny APK hanana ny fampiharana Google Pixel Phone.
Google Photos izao dia mamorona GIF ny horonan-tsarinao hizarana mora
Ireo GIF noforonin'i Google Photos ho azy ireo dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy sy fampiharana fandefasan-kafatra
Fampiharana tena ilaina hanararaotra ny Edge anao
Androany dia manolotra anao ireo rindranasa ilaina 3 izahay hanararaotra ny Edge anao, fampiharana maimaimpoana daholo izy ireo hanararaotra ny fihodinan'ny Samsung anao.
Dingana Amazon Music Unlimited mba hanamafisana kokoa ny Spotify sy Apple Music
Vao nandefa ny serivisy streaming mozika antsoina hoe Amazon Music Unlimited i Amazon, izay misy hira am-polony tapitrisa
Duolingo dia miditra amin'ny tazo bot
Duolingo dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fianarana fiteny ary havaozina amin'ny chatbots hanolotra resaka voajanahary.
Sintomy ary apetaho Slimperience ny tranokala maivana sy azo alamina indrindra amin'izao fotoana izao
Androany aho te-hanolotra izay ho ahy no mpitety tranonkala maivana indrindra indrindra amin'izao fotoana izao, mpitety tranonkala antsoina hoe Slimperience ary mahatalanjona izany.
[ROOT] Ahoana ny fametrahana MaxxAudio amin'ny Android rehetra
Anio dia asehonay anao ny fomba fametrahana MaxxAudio amin'ny terminal Android rehetra ary amin'izany dia afaka mankafy ny iray amin'ireo equalizer tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao.
Fampiharana manokana 4 ho an'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy ny fitantanana tetikasa vondrona
Raha mitady fampiharana ho an'ny famokarana ianao ary efa nanomboka ny oniversite, dia azo ampiasaina ireo fampiharana 4 ireo mba hahazoany tombony betsaka amin'ireo tetikasa ireo.
Fampiharana hamoronana GIF-nao manokana
Ary na dia ny WhatsApp aza dia mamela anao hizara GIF mihetsika, dia manolotra rindrambaiko maromaro izahay ahafahanao mamorona an'ireto sary miaina ireto mora foana.
Runtastic dia mifangaro amin'ny Google Play Music mba hamelombelona ny fanazaran-tena
Runtastic dia efa manolotra fampidirana amin'ny Google Play Music hametrahana mozika amin'ny fampihetseham-batanao nefa tsy mila miala amin'ny fampiharana
Prisma manampy fanohanana horonantsary, ao amin'ny iOS ihany izy izao
Aorian'ny fahatongavan'ilay fanavaozana miaraka amin'ny fanovana an-tserasera ireo sary amin'ny Android miaraka amin'ny Prisma, dia ho tafiditra ao ny fanohanana ireo horonan-tsary avy amin'ny fampiharana.
Giphy Cam dia mitondra ny fahaizany mamorona GIF sy effets manokana majika amin'ny Android
Giphy Cam dia rindrambaiko iray izay avy amin'ny iOS ary iray amin'ireo tsara indrindra hamoronana GIF mahatsikaiky mahatsikaiky afaka atsipinao amin'ny endrikao.
[APK] Yahoo dia mandefa fampiharana vaovao amin'ny Android mba hampahafantarina azy amin'ny fomba hafa: Newsroom
Miaraka amin'ny Newsroom dia ho afaka haharaka ny vaovao hatrany ianao ary hamorona fomba hafa hanarahana ny zava-mitranga rehetra manerantany.
[APK] Shazam Lite ny dikan-teny lavalava an'ny Shazam mety ho an'ny fantsona tsy manam-bola firy
Androany aho mitondra anao ny apk an'i Shazam Lite, ilay vaovaon'i Shazam vaovao mamaky teny sy manoratra natao manokana ho an'ny terminal tsy misy loharano sy fifandraisana malemy.
[Lahatsary] Izany no fiasan'ny Pixel Launcher Launcher Shourcouts
Androany izahay dia mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny Launcher Shourcouts an'ny Pixel Launcher, ilay Launcher default an'ny Google Pixel vaovao.
Maimaimpoana ny mpanampy fiara tsara indrindra ary ho tianao izany
Ankehitriny dia asehonay ilay ho ahy sy ho an'ireo mpampiasa Android marobe no mpanampy tsara indrindra ho an'ny fiara, fampiharana izay tsy tokony ho diso amin'ny Android-nao.
Camera 51, fampiharana fakantsary tsara indrindra ho an'ny dummies sary
Androany dia te-hanolotra izay ho ahy aho ny fampiharana fakantsary tsara indrindra ho an'ny dummies sary Android na sary finday.
Nilaza i Google fa ny Pixel Launcher dia natokana ho an'ny telefaona Pixel
Google dia nanapa-kevitra ny hanao ny Pixel Launcher ho an'ny telefaona Pixel roa ary ankehitriny tsy fantatra na hamoaka amin'ny telefaona hafa izany.
Avelan'ny Facebook Messenger hafenina ny resaka, na dia misy quirk aza
Ary farany, avela ao amin'ny Facebook Messenger ny fanafenana miafina hatramin'ny farany, na dia tsy maintsy ampandehanan'ny tanana tanana aza ny mpampiasa.
Chromecast Ultra miaraka amin'ny streaming 4k amin'ny vidiny € 79
Google dia manolotra ny Chromecast Ultra 4K afaka mandefa atiny amin'ity kalitao ity avy amin'ny serivisy toa ny YouTube na ny finday avo lenta
SwiftOpen hivadika haingana eo amin'ireo fampiharana tianao
Androany dia manolotra fampiharana maimaim-poana ho anao amin'ny Android aho, izay hanampy anay hiova haingana eo amin'ireo rindrambaiko ankafizinay ao anatin'ny ampahafolon'ny iray segondra.
Android N Quickcuts maimaim-poana amin'ny Android rehetra
Androany izahay dia manazava ny fomba ahazoana Android N Quickcuts maimaim-poana amin'ny Android 5.0 na avo kokoa miaraka amin'ny fametrahana tsotra ny Launcher.